कांग्रेस सजिलै बिजयी हुन्छ :- ढुङ्गाना | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » बिबिध » कांग्रेस सजिलै बिजयी हुन्छ :- ढुङ्गाना
कांग्रेस सजिलै बिजयी हुन्छ :- ढुङ्गाना
Posted by Itahari Fm | error | ६०९ पटक
सुनसरी क्षेत्र नं २ राजनैतिक प्रतिष्ठाको क्षेत्रको रुपमा परीचीत भइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको वर्तमान अवस्था, चुनावी रणनिति र योजनाको बिषयमा नेपालि कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं २ का निर्वाचन परीचालन समितिका संयोजक तथा महासमिति सदस्य राजिव ढुङ्गाना संग विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानी ।
सुनसरी क्षेत्र नं २ मा कांग्रेसको अवस्था कस्तो छ ?
कांग्रेस कतै रक्षात्मक त कतै सुधारात्मक अवस्थामा छ । आफ्नो भोटको रक्षा गर्ने र नयाँ मतदातालाइ आकार्षीत गर्ने काम कांग्रेसले गरीरहेकोछ । २ नं क्षेत्रमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सम्पुर्ण सदस्यहरु बिजयी हुन्छन् त्यसमा हामी ढुक्कछौ ।
तपाइ २ नं क्षेत्रको निर्वाचन परीचालन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । तपाइको जिम्वेवारी के ?
म निर्वाचन परीचलन समितिको संयोजक भएकोले सुनसरी क्षेत्र नं २ मा नेपाली कांग्रेसलाइ विजयी गराउनु हो । त्यसको लागी पार्टीका हरेक संयन्त्र परीचालन गर्ने काम भइरहेको छ । आन्तरीक रुपमा र बाह्य रुपमा चुनाव प्रचार प्रसार भइरहेको छ । यस क्षेत्रका कांग्रेसका तिनवटै उमेद्धवार लाइ बिजयी गराउने जिम्वेवारी लाइ सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्दैछु ।
कांग्रेस विजयी हुने आधार के देख्नु हुन्छ ?
कांग्रेस भनेको एउटा पार्टी मात्र हैन । यो देशको भविश्य पनिहो । त्यो कुरा जनताले बुझेका छन् । जनता जनार्दन हुन् । जनतालाइ को कती सत्य र बिकाशप्रेमी छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञानछ । कांग्रेस सम्पुंर्ण जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । त्यसैले पनि कांग्रेसले जित्छ । जहा सम्म २ नं क्षेत्रको कुरा छ । त्यहा कम्युनिष्टको पुरानो प्रभाव समाप्त भइसकेको छ । कम्युनिष्ट झुट बोल्छन् भन्ने सम्पुर्ण जनतालाइ परेका हुँदा कांग्रेस बिजयी हुन्छ ।
कांग्रेसलाइ भोट किन हाल्ने ?
कांग्रेसको इतिहास देश बनाउन बाट सुरुभएको हो । समाजीक बिभेद र अन्यायको बिरुद्धमा लड्नको लागी कांग्रेस स्थापना भयो । इतिहासनै भरपर्दो र जनता मैन्त्रि भएकोले जनता कांग्रेसको पक्षमा छन् । बिचमा बिभिन्न किसिमको भ्रममा पारेर जनतालाइ झुक्याउने काशीस भयो तर अब जनता धेरै सचेत भइसके त्यसैले कांग्रेसको बिकल्प कोही छैन भन्ने जनताको भावना हामीले बुझेका छौ । जहाँ सम्म सुनसरीको कुराछ । यस क्षेत्रको बृहतर बिकाश कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र सम्भवछ । प्रतिनिधिसभाका उमेद्धवार सिताराम एक बिकाश प्रेमी सरल उमेद्धवार हुनुहुन्छ । वहाँ पहिला पनि सुनसरी क्षेत्र नं ४ बाट बिजयी हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला वहाँ ले गरेको काम बाट जनता प्रभाबित भएकाछन् । प्रदेश सभाका उमेद्धवार युवा नेता हुनुहुन्छ । अव युवाको जमाना सुरु भयो त्यसैले जमाना अुनुसारको मत आकर्षीत हुन्छ र कांग्रेस ले जित्छ । परीवर्तन र बिकाशको लागी कांग्रेस भन्दा उपयुत्तहुन्छ ।
कांग्रेस भित्र अन्तघार्तको रोग छ भन्छन्नी त्यसको कतै छाया पर्ला की ?
कांग्रेस भित्र यो रोग नभएको हैन । त्यसको चपेटामा कांग्रेस बारम्बार परेकैहो । तर यसपाली कांग्रेसले अन्तर्घात रोगको शल्यक्रिया गरीसक्यो । अब यो रोग अरु पार्टीमा होला जसको फाइदा कांग्रेसले लिनसक्नुपर्छ । कांग्रेस आफ्नै कारण कमजोर भयो भने देश कमजोर हुन्छ । त्यसैले कांग्रेसमा कुनै आन्तरीक समस्या छैन । त्यसैले कांग्रेस सबैभन्दा शक्तिशाली भएकोछ ।
प्रतिष्पर्धीलाइ कुन रुपमा हेर्नु भएको छ ?
जहील्यै पनि बिपक्षि लाइ कमजोर ठान्नु त हुन्न । तथापी यसपटक सुनसरीमा हाम्रो जित सबै क्षेत्रमा निश्चित झै भएकोछ । वहाँ हरुलाइ निर्वाचनमा सहभागी भएर मतपरीणाम स्विकार गर्न अनुरोध गर्दछु । कांग्रेसको पालामा बिकाश कस्तो हुदौ रैछ हेर्न अनुरोध गर्छु । र अर्को निर्वाचनको लागी आमन्त्रण गर्न चाहान्छु ।